मनिषा कोइरालाबारे भारतीयहरू निम्न स्तरको गा-ली गलौजमा उत्रेपछि दिपकराजले दिए कडा जवाफ – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/मनिषा कोइरालाबारे भारतीयहरू निम्न स्तरको गा-ली गलौजमा उत्रेपछि दिपकराजले दिए कडा जवाफ
अभिनेत्री मनिषा कोइरालालाई अहिले भारतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आ-क्रमणको तारो बनाइएको छ । नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा मनिषाले गरेको एउटा ट्विटलाई लिएर भारतीयहरू निम्नस्तरको गा-लीगलौजमा उत्रेका छन् । भारतीय मिडियाको आ-रोप छ, मनिषाले भारतको नुन खाएर चीनको पक्षपोषण गरिन् ।
दीपकराज भन्छन्, ‘मनिषा कोइराला पहिलो नेपाली कलाकार हुन् । जसले त्यो स्थानमा पुगेर गर्वसाथ आफूलाई नेपाली भनेरै चिनाइन् । उनकै हाराहारीमा चर्चा पाएका केही कलाकार आफूलाई नेपाली भन्न रुचाउँदैनन् । तर, मनिषालाई भारतमा पनि नेपाली सुन्दरी भन्ने गरिन्थ्यो । उनी नेपाली छोरी भएकाले नेपालको पक्षमा बोल्नु कुनै अनौठो कुरा होइन ।’
मनिषाले गरेको ट्विटलाई भारतीय मिडियाले ‘ट्विस्ट’ गरेको दीपकराजले बताए । नेपालमा हुने जुनसुकै राष्ट्रवादी सं-घर्षमा चीनको हात देख्ने भारत सरकार र त्यहाँका मिडियाको सोचाइ नै मुर्खतापूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘मनिषाले कहाँनेर चीनको समर्थन गरेकी छन् ? नेपाल र चीन मिलेर भारतमाथि धा-वा बोल्नुपर्छ भनेर लेखेकी छन् र ? उनले त नेपालको सरकारले आफ्नो सीमा रक्षाका लागि लिएको पहलप्रति खुसी व्यक्त मात्रै गरेकी हुन् । यति गर्दा उनीहरूले अनर्गल प्रचार किन गर्ने ?’